Nhau - Mushure mekuratidzira kwemarudzi, zvidhori zvakakandwa muUS
Mushure mekuratidzira kwemarudzi, zvidhori zvakakandwa muUS
Mhiri kweUnited States, zvifananidzo zvevatungamiriri veConfederate nedzimwe nhoroondo dzakaunganidzwa nehuranda uye kuurayiwa kwevanhu vemuAmerica vari kuputswa, kusvibiswa, kuparadzwa, kutamiswa kana kubviswa zvichitevera kuratidzira kwakanangana nerufu rwaGeorge Floyd, murume mutema, mumapurisa Kuchengetwa musi waMay 25 muMinneapolis.
MuNew York, iyo American Museum ye Natural Nhoroondo yakazivisa neSvondo kuti ichabvisa chifananidzo chaTheodore Roosevelt, mutungamiri wechi 26 weUS, kubva kunze kwemusuwo mukuru. Icho chifananidzo chinoratidza Roosevelt akatasva bhiza, akazara neAfrican American uye muNative American netsoka. Iyo miziyamu haisati yataura kuti ichaitei nemufananidzo.
MuHouston, zvifananidzo zviviri zveConfederate mumapaki eruzhinji zvakabviswa. Chimwe chezviumbwa izvi, Mweya weConfederacy, chifananidzo chendarira chinomiririra mutumwa ane munondo nebazi remuchindwe, chakange chakamira muSam Houston Park kweanopfuura makore zana uye ikozvino chiri mudura reguta.
Guta rakaronga kuendesa chifananidzo kuHouston Museum yeAfrican American Culture.
Nepo vamwe vachidaidzira uye vachitora matanho ekubvisa zvifananidzo zveConfederate, vamwe vanozvidzivirira.
MuRichmond, Virginia, chifananidzo cheConfederate mukuru Robert E. Lee chave muzinda wekupokana. Varatidziri vaida kuti chifananidzo chibviswe, uye Gavhuna weVirginia Ralph Northam akapa chirevo chekuti chibviswe.
Nekudaro, iwo murawo wakavharwa sezvo boka revaridzi vezvivakwa rakamhan'ara kumatare edzimhosva vachipokana kuti kubvisa chifananidzo kuchadzikisira zvivakwa zvakapoteredza
Mutongi weHurumende Bradley Cavedo akatonga svondo rapfuura kuti chifananidzo ichi chivakwa chevanhu zvichibva pachibvumirano chechivako kubva muna 1890. Akapa chisungo chinorambidza nyika kuibvisa pasati paitwa mutongo wekupedzisira.
Chidzidzo che2016 cheSouthern Poverty Law Center, sangano risingabatsiri pamutemo chekumiririra, chakawana kuti paive nezviratidzo zvinopfuura 1,500 zveveruzhinji Confederate zviratidzo muUS zvese zvidhori, mireza, marezinesi ehurumende, mazita ezvikoro, migwagwa, mapaki, mazororo. uye mabhesheni emauto, mazhinji akanyanya muSouth.
Huwandu hwezvifananidzo zveConfederate nezvivakwa panguva iyoyo zvaive zvinopfuura mazana manomwe.
Sangano reNational Association for the Advancement of Coloured People, sangano rekodzero dzevanhu, rakurudzira kubviswa kwezviratidzo zveConfederate munzvimbo dzeveruzhinji nehurumende kwemakore. Nekudaro, kune akasiyana maonero ekuti ungagadzirise sei nenhoroondo dzakagadzirwa.
"Ndakabvaruka pamusoro peizvi nekuti uku ndiko kumiririrwa kwenhoroondo yedu, uku ndiko kumiririrwa kwezvataifunga kuti zvakanaka," akadaro Tony Brown, purofesa mutema wezvematongerwo enyika uye director weRacism and Racial Experiences Workgroup paRice University. "Panguva imwecheteyo, tinogona kuva neronda munharaunda, uye hatifunge kuti hazvina kunaka uye tinoda kubvisa mifananidzo."
Pakupedzisira, Brown akati angada kuona zvifananidzo zvichiramba.
“Tinoda kuda kuchenesa nhoroondo yedu. Isu tinowanzoda kuti titi rusaruraganda harisi chikamu chedu zvatiri, kwete chikamu chezviumbwa zvedu, kwete chikamu chehunhu hwedu. Saka, paunotora chifananidzo uchienda, urikuchenesa nhoroondo yedu, uye kubva panguva iyoyo zvichienda mberi, zvinowanzoita kuti avo vanofambisa chifananidzo vanzwe kuti vaita zvakakwana, ”akadaro.
Kwete kuita kuti zvinhu zviende asi kuita kuti zvinhu zvioneke nemamiriro ezvinhu ndizvo chaizvo zvaunoita kuti vanhu vanzwisise kuti rusaruro rwakadzika zvakadii, Brown anodaro.
“Mari yerudzi rwedu inogadzirwa nedonje, uye mari yedu yese yakadhindwa nevarungu, uye vamwe vacho vaive nevaranda. Paunoratidza humbowo hwemhando iyoyo, iwe unoti, mira kweminiti, isu tinobhadhara zvinhu nekotoni yakadhindwa nevaridzi vevaranda. Ipapo unoona kuti rusaruro rwakadzika sei, ”akadaro.
James Douglas, purofesa wezvemitemo kuTexas Southern University uye purezidhendi wechitsauko cheHouston che NAACP, angade kuona zvidhori zveConfederate zvakabviswa.
“Havana chekuita neHondo Yenyika. Mifananidzo iyi yakavakwa kuti ikudze varwi veConfederate uye kuti vanhu vemuAfrica vazive kuti vachena ndivo vari kutonga. Vakavakwa kuti varatidze simba rakange riine vanhu vachena pamusoro pevanhu vemuAfrica, ”akadaro.
Douglas ariwo mutsoropodzi wesarudzo yaHouston yekufambisa mweya weiyo Confederacy chifananidzo kuenda kumuseum.
“Chiumbwa ichi ndechekukudza magamba akarwira kodzero dzehurumende, zvikuru avo vairwira kuchengeta vanhu vemuAfrica sevaranda. Unofunga kuti pane munhu angafunga kuisa chifananidzo muHolocaust Museum iyo yakati chifananidzo ichi chakavakirwa kukudza vanhu vakauraya maJuda mukamuri yegasi? ” Akabvunza.
Zvifananidzo uye zviyeuchidzo ndezvekukudza vanhu, akadaro Douglas. Kungovaisa chete muAmerican American museum hakubvise chokwadi chekuti zvifananidzo zvinokudza.
Kuna Brown, kusiya zvidhori munzvimbo hazvikudzi munhu iyeye.
"Kwandiri, zvinoratidza musangano uyu. Paunenge uine Confederate chifananidzo, haitaure chero chinhu nezve iye munhu. Inotaura chimwe chinhu nezve hutungamiriri. Inotaura chimwe chinhu nezve wese munhu akasaina pachifananidzo icho, wese munhu akati icho chifananidzo ndechekoko. Handifunge kuti unoda kudzima nhoroondo iyoyo, ”akadaro.
Brown akati vanhu vanofanirwa kushandisa nguva yakawanda vachifunga kuti zviri sei kuti "tasarudza kuti aya magamba edu kutanga, tichifunga kuti tasarudza sei kuti mifananidzo iyi yanga yakanaka".
Iyo Nhema Hupenyu Nyaya Nyaya iri kumanikidza America kuti iongorore zvekare zvakapfuura kupfuura zvivakwa zveConfederate.
HBO yakabvisa kwenguva pfupi iyo 1939 bhaisikopo Yakaenda neMhepo kubva kune yayo online zvinopihwa svondo rapfuura uye inoronga kudzoreredza iyo yekare firimu nehurukuro yeyakaitika mamiriro ayo. Iyi firimu yakashoropodzwa nekukudza huranda.
Zvakare, svondo rapfuura, Quaker Oats Co yakazivisa kuti yaibvisa mufananidzo wemukadzi mutema kubva mumapakeji ayo ane makore-zana-makumi matatu sirafu nepancake musanganiswa brand Aunt Jemima uye achichinja zita rayo. Mars Inc yakateedzerana nekubvisa mufananidzo wemurume mutema kubva mumapakeji erudzi rwayo rwakakurumbira rwemupunga Uncle Ben uye ndokuti yaizoitumidza zita.
Mavara maviri aya akashoropodzwa nekuda kwemifananidzo yavo yekufungidzira uye kushandiswa kwekuremekedza kuratidza nguva apo vachena vekumaodzanyemba vaishandisa "mainini" kana "babamunini" nekuti vaisada kudana vanhu vatema kuti "Mr" kana "Mai".
Vaviri Brown naDouglas vanowana kufamba kweHBO kune njere, asi vanoona kufamba nemakambani maviri ezvikafu zvakasiyana.
"Chinhu chakakodzera kuita," akadaro Douglas. “Tine makambani makuru ekuziva hunyengeri hwenzira dzawo. Ivo (vari kuti), 'Tinoda kuchinja nekuti tinoziva ichi chiratidzo chisina kunaka chevanhu vemuAfrica.' Vanozviziva izvozvi uye vari kuvabvisa. ”
Kuna Brown, mafambiro ingori imwe nzira yekuti makambani atengese zvimwe zvigadzirwa.
Varatidziri vanoedza kukanda pasi chifananidzo chaAndrew Jackson, aimbova mutungamiri weUS, kuLafayette Park pamberi peWhite House panguva yekuratidzira kwekuenzana kwemarudzi muWashington, DC, neMuvhuro. JOSHUA ROBERTS / VANHU
Post nguva: Jul-25-2020